Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Ny teti-bolan'ny fizahan-tany any Odisha India dia nahita fiakarana tsy mbola nisy toa azy » Page 2
“Nandritra ny fotoana maharitra dia nisy fiovana teo amin'ny fomba fanaontsika amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa. Izahay dia mamolavola fotodrafitrasa amin'ny fomba tena voarindra sy mifangaro. Izahay koa mijery ny toerana aleha amin'ny fomba holistic sy ny drafitra master manomana isaky ny toerana alehantsika. Lisitry ny laharam-pahamehana no fantatra fa misy boriborintany 70 ary hampiasa vola be ny governemanta. Ny kitapom-bolan'ny fampandrosoana fotodrafitrasa ho an'ity taona ity dia avo roa heny ”, hoy ihany izy.
“Hampiasa vola amin'ny vokatra vaovao koa izahay, indrindra ny fitsangantsanganana an-tsambo sy sambo. Nifantina ny mpandraharaha fitsangantsanganana an-dranomasina lehibe indrindra any India izahay hanomboka catamarans. Amin'ny voalohan'ny taona ho avy dia hanana an'i Odisha amin'ny sarintany fitsangantsanganana an-dranomasina mahafinaritra eto amin'ny firenena izahay, ”hoy Andriamatoa Dev.
Nilaza ihany koa izy fa ny FICCI Odisha State Council dia tsy nanasongadina fotsiny ireo olana natrehin'ity indostria ity sy ireo sehatra maro samihafa fa niara-niasa tamin'ny governemanta tamin'ny olana samihafa ao anatin'izany ny famatsiana oxygen.
Ramatoa Monica Nayyar Patnaik, filohan'ny filankevi-panjakana FICCI Odisha ary MD, Sambad Group, dia nanamarika fa ny FICCI Odisha State Council dia niara-niasa tamin'ny Governemanta Odisha ho mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria nasionaly ho an'ny fandaharana samihafa toa ny Make in Odisha, Krushi Odisha, ary Odisha 50 ary mikarakara latabatra boribory virtoaly amin'ny sehatra samihafa miaraka amin'ny governemanta fanjakana. "Izahay (FICCI) dia ampahany amin'ny hetsiky ny governemanta ihany koa amin'ny fitondrana vaksiny sy ny famatsiana famatsiana oksizena ara-pahasalamana," hoy izy.
Andriamatoa JK Mohanty, Filoha mpiara-mitantana ny Komity Nasionalin'ny Fizahan-tany FICCI ary CMD, Swosti Group, dia nilaza fa ny fanjakana dia nanao tolona mahery vaika sy hentitra manoloana ny loza voajanahary toy ny rivodoza ary tato ho ato, COVID. “Ny governemanta Odisha dia nirotsaka an-tsehatra hatrany. Ny ankamaroan'ny fitakianay (ny indostria) dia efa nojerena ary noraisina tamin'ny sehatra avo indrindra, ”hoy izy
Andriamatoa SK Dash, talen'ny Trip Process Pvt Ltd.; Andriamatoa Vishal Kamat, CEO an'ny Kamat Group of Hotels; Andriamatoa Sanjib Kumar Rout, mpikambana ao amin'ny FICCI ary filoha mpanorina ny CV Raman Global University, ankoatry ny hafa koa dia naneho ny heviny sy ny heviny.